फितलो अध्यादेश : न ‘बुहारी’ को माग पूरा भयो, न एनआरएनको | Ratopati
नागरिकता अध्यादेशको नालीबेली
जसपाको माग सम्बाेधन नभए पनि महन्थ ठाकुर मख्ख !
अरुण बराल/एसके यादव
सरकारले संविधानको धारा ११ मा टेकेर अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्दै गर्दा समेट्नै पर्ने चारवटा पक्ष थिए : एक– जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु । दुई– बाबु र आमाको ठेगान नभएका बेवारिसे सन्तानहरु । तीन– वैवाहिक अंगीकृत र तिनका सन्तानहरु । र, चार– गैरआवासीय नेपालीहरु अर्थात एनआरएन र तिनका सन्तानहरु ।
संसद विघटनलगत्तै ओली सरकारले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको छ । तर, यो अध्यादेशले पहिलो र दोस्रो दुईवटा पक्षलाई मात्रै सम्वोधन गरेको छ । अध्यादेशले वैवाहिक अंगीकृत र एनआरएनको समस्यालाई भने नजरअञ्दाज गरेको छ ।
अध्यादेश यति फितलो र एकांगी देखिएको छ कि २०७२ सालमै संविधानले गर्नु भनेको कामलाई यसले नदेखेजस्तो गरेको छ । जसपा र एनआरएनले उठाउँदै आएका मागहरुलाई यो अध्यादेशले छोएकै छैन । अध्यादेशले झापाको जन्मसिद्ध समस्यालाई सम्वोधन गरेको छ तर मधेसको अंगीकृतको समस्यालाई चाहिँ छोएको छैन । गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भुलेको छ ।
हुनत सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्नो माग पूरा भएको भन्दै खुशीयाली मनाइरहेको छ । तर, अहिले सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो २०७२ सालको संविधानमै टेकेर ल्याइएको हो । जसपाको मागलाई यो अध्यादेशले समेटेको छैन ।
संविधानअनुसार २०७२ सालमै नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन । संविधान बनेको ६ वर्षसम्म संविधानअनुसारको नागरिकतासम्बन्धी ऐन बन्न सकेन । ०७५ सालमा तयार भएको नागरिकता संशोधन विधेयक पनि विवादका कारण संसदमा थन्किएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।
संविधानको धारा ११ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पुरानो नागरिकता ऐन (२०६३) मा समेटिने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानअनरुपको सम्पूर्ण कानूनी प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा उसले सार्वजनिक खपतका लागि अधकल्चो संशोधन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस गर्दै आएका प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘सरकारले संविधानको आंशिक पक्षलाई मात्रै अध्यादेशमा समेटेको देखिन्छ, बरु २०७५ साल साउनमा तयार भएको संशोधन विधेयकलाई नै ल्याएको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, यो अध्यादेश अपूरो ढंगबाट आयो ।’
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट राष्ट्रघात भएको, देश फिजीकरणको दिशामा गएको र सत्ता रक्षाका लागि ओलीले जसपाको मागअनुसार वा विदेशीको दबावमा अध्यादेश ल्याएको भन्नेखालका आरोपहरु विपक्षीले लगाइरहेका छन् । देशमा राजनीतिक तनाव बढेकै बेला सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत यसरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा यस्ता आशंकाहरु जन्मिएका हुन् ।
तर, अध्यादेशमा नागरिकतासम्बन्धी जे प्रवन्ध ल्याइएको छ, त्यो कन्टेन्टचाहिँ संविधानभन्दा बाहिर देखिँदैन । संविधानमै टेकेर सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गरेको देखिन्छ ।
नागरिकता ऐन सम्बन्धमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन र अध्यादेशमा के छ भिन्नता ?
अहिले जारी भएको अध्यादेशले धारा ११ (३) को यही प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै कपी–पेस्ट गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमा संविधानले बोलेको भन्दा बेग्लै वा नयाँ प्रावधान थपेको छैन ।
जन्मसिद्ध र बेवारिसे सन्तानलाई सम्वोधन
संविधानअनुसार ऐन संशोधन नभएका कारणले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु वंशजको नागरिकता लिनबाट बञ्चित हुँदै आइरहेका थिए । अब यो अध्यादेश आएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् ।
अध्यादेशले गरेको अर्को नयाँ प्रावधानअनुसार अब बाबुआमाको ठेगान नभएका नेपालमा जन्मेका बेवारिसे सन्तानहरुले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । पछि उनीहरुका बाबुआमा पत्ता लागे र ती विदेशी रहेछन् भने वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ । यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो, अहिले अध्यादेशमार्फत ऐनका रुपमा आएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २५ छ । अध्यादेश आएपछि अब उनीहरुका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । यो संख्या बढीमा ३ लाखसम्म हुने सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
जन्मको आधारमा दिइने नागरिकताको ‘कट अफ डेट’ नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ साल चैत मसान्तलाई मानिएको छ । ०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई स्थायीरुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भनिएको थियो ।
यस्तो नागरिकता लिन चाहनेले संविधानसभाको निर्वाचन (०६४) अगावै निवेदन दिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्नेले ऐन लागू भएको २ वर्षसम्म (२०६५) सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था थियो ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज​को नागरिकता दिने अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत नभए पनि यो प्रावधानमा टेकेर झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा पहाडे मूलका भारतीय नागरिकहरुले नक्कली नागरिकता बनाउने सम्भावनालाई भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, विगतमा पनि गृहमन्त्रालयले नागरिकता वितरण सुरु गर्नासाथ पूर्वी नेपालमा त्यसरी नक्कली नागरिकता लिनेहरुको भीड लाग्ने गरेको थियो । यी जिल्लाहरुमा भुटानी शरणार्थीहरुले समेत विगतमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको र अहिले उनीहरुका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
अहिले कोरोना महामारीका बेला सरकारले नागरिकता बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको छ । यसको नियमावली र निर्देशिका बन्न बाँकी छ । तर, नागरिकता बाँड्ने भीडमा विदेशी घुसपैठ हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
विगतमा गृहमन्त्रालयले कानूनै नबनाई नागरिकता वितरण सुरु गर्दा यही दुरुपयोगको सम्भावनालाई औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएर अभियानमाथि रोक लगाएको थियो ।
नेपालमा अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता दिन छाडिएको छ । तर, जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा व्यवस्था छ । तथापि, अहिलेसम्म संविधानअनुसार कानून नबन्दा करिब १ लाख ९० हजार जन्मसिद्ध नागरिकका लाखौं सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन पाएका छैनन् । अहिलेको अध्यादेशले तिनैलाई समेट्न खोजेको हो ।
२०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानको व्यवस्था मात्रै अहिलेको अध्यादेशमा समेटिएको छ । अर्थात, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने छन्, अंगीकृतका सन्तानले होइन ।
हिजोका कुरा : नागरिकता चकलेट होइन–ओली, बुहारीले हैरान खेलाए– कृष्णगोपाल
अब नागरिकता ऐन २०६३ ले के भनेको छ, हेरौं–
के हो त जसपाको माग ?
गैरआवासीय नेपालीको माग पनि सम्वोधन भएन
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई संविधानले दिनु भनेको नागरिकताका सन्दर्भमा पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मौन बसेको छ । जबकि, २०७२ सालमा बनेको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सकिने बताउँदै यस्तो लेखिएको छ–
‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’
संविधानको यही धारालाई पछ्याउँदै २०७५ सालको प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ मा ७क थपिएको थियो, जसको उपदफा १ मा संविधानको धारा १४ लाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको थियो । उपदफा २ र ३ मा गैरआवासी नागरिकता लिने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको थियो ।
हेर्नुहोस् नागरिकता संशोधन विधेयक २०७५ को प्रावधान
गैरआवासीय नेपालीहरुले विगत लामो समयदेखि नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ ले उनीहरुको मागलाई सम्वोधन नगरे पनि संविधानको धारा १४ ले सम्बोधन गरेको थियो । तर, संविधान बनेको ६ बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई ऐनमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
गैरआवासीय नागरिकताका सम्बन्धमा एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘संविधानमा मात्रै लेखिएको छ, कानून अझै पास भएको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा समग्र कुरा समेटिएर आउनेछन् भन्ने हामीलाई आश्वासन मिलेको थियो । यसपटक त अध्यादेशबाट अरु ईस्यू मात्रै सम्बोधन भयो ।’